Kazakhstan: Fahatapahan’ny herinaratra tany Almaty · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Aogositra 2018 3:22 GMT
(Marihina fa tamin'ny 20 Aprily 2009 no nivoahan'ny lahatsoratra teny Anglisy)
Ny Alarobia 15 Aprily 2009, noho ny fahavoazana teo amin'ny taribin-jiro mitondra herinaratra Toktogul-Frunze (tariby lehibe indrindra ao amin'ny Repoblika Kyrgyz) dia tapaka ny herinaratra tany amin'ny ankamaroan'ny orinasa sy ny tranobe lehibe ao an-tanàndehibe avaratr'i Kirghizistan sy atsimon'i Kazakhstan. Naato ny fampiasana etona sy rano mafana, tsy niasa ny ATMs (DAB na GAB, hoy isika), taty aoriana tapaka ireo tranonkala Kazakhstani maro sy ny tobin'onjam-peo. Mbola nandeha kosa ny tambajotra finday.
Tapaka ny herinaratra tao Almaty: maizina ny làlana, tsy niasa ny jiron'ny fifamoivoizana, orana, lozam-pifamoivoizana … Tsy nisy jiro ny afovoan-tanàna iray manontolo sy ny ankamaroan'ny distrika madinika ihany koa. Nahita hôpitalim-piterahana tao anaty aizina tanteraka mihitsy aza ny iray tamin'ireo mpanao gazetinay ary nandrakitra antsafa niaraka tamin'ny dokotera izy, hoy i pulemetchizza nanoratra [ru].
Namoaka ny sary tsara tarehy mampiseho an'i Almaty tamin'ny fotoana mahazatra sy nandritra ny fotoana tsy nisy herinaratra i Graveric
Nilaza i Ehot hoe :
Mbola ratsy noho ny fahatapahana teo aloha ny toe-draharaha tamin'ity indray mitoraka ity. Izaho manokana dia nahita ny tilikambon'ny fahitalavitra tamin'io fotoana io – lany herinaratra tanteraka izany, anisan'izany ny varavarankely nisy ny efitra fanaraha-maso- ary avy eo dia nihanazava tsikelikely indray. Midika izany fa misy olana lehibe. Tiako ny misaotra ny mpitandro ny filaminana misahana ny fifamoivoizana tamin'ny fandaminana ara-dalana ny fifamoivoizana.
Niezaka nikaroka vaovao momba ny fahatapahan'ny herinaratra i Programmilla :
Tsy nisy na inona na inona. Ny fifanakalozan-kevitra tao amin'ny aterineto ihany no nanana lohahevitra momba izany, saingy tsy nisy resaka tamin'ny antsipiriany. Tsy azoko, tanàndehibe ve sa tanànakely i Almaty ? Nahoana no tsy nisy ny vaovao?
Na dia izany aza, fantatra hatrany tamin'ny fanesoesoany ireo bilaogera Almatiana . Nanamarika i Sav-age hoe:
Nanaraka an-tsakany (na dia efa tara kely aza) ny tolo-kevitra hanatevin-daharana ny Earth Hour (= Oran'ny Tany) ny sampan-draharahan'ny angovo ao Almaty.
Nihevitra tsara kokoa i Roxichka:
Tena mahafinaritra sy mampieritreritra ny fahatapahan'ny herinaratra. Isika ihany koa dia efa zatra ny fiainana virtoaly amin'ny Aterineto sy ny fahitalavitra, ary indraindray mety ho fifaliana mihitsy aza ny tsy fisian'ny jiro.
Na izany aza, niaiky ny tombontsoa azo avy amin'ny herinaratra izy:
Talohan'ny fanombohan'ny lalao baolina kitra nifanandrinan'i Porto-ManUnited tsara no niverina nandeha indray ny jiro!
Toy izao manaraka izao ny famintinan'i megakhuimyak :
Fantatra tamin'ny volana Novambra tamin'ny taon-dasa fa tsy ampy rano i Toktogul [fitahirizan-drano] ary hisy ny tsy fahampian'ny fahafahany mihodina io lohataona io. Fantatra tamin'ny volana Septambra tamin'ny taon-dasa fa tena mitotongana ny tambajotran'ny herinaratra, izay midika fa tena marefo izy ireo. Saingy vao omaly no fantatra fa tsy nisy na iza na iza tao Kyrgyzstan na Kazakhstan nandray fepetra hiatrehana izany toe-javatra izany.
Ary nihevitra i restec fa io fahatapahan'ny herinaratra io -
dia antony tsara iray hampivelarana ny rafitra mahaleotena amin'ny famatsiana herinaratra, amin'ny fomba mety indrindra, amin'ny alàlan'ny fampiasana angovo hafa.
Navoaka tao amin'ny neweurasia ihany koa